Madaxweynaha Somaliland oo khudbad u jeediyey labada gole ee Somaliland -DAAWO • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Madaxweynaha Somaliland oo khudbad u jeediyey labada gole ee Somaliland -DAAWO
Madaxweynaha Somaliland oo khudbad u jeediyey labada gole ee Somaliland -DAAWO
March 25, 2018 - By: Keyse Aadan
Madaxweynaha Somaliland ayaa maanta oo Axad ah khudbadiisi sanadlaha ahayd ee uu u jeediyey labada gole ee Somaliland, ee aqalbka Baarlamaanka iyo golaha guurtida.
Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbadiisa uga hadley heshiiskii dhawaan ay ku saxiixeen dalka Imaaraadka Carabta, taas oo uu sheegay in uu ahaa saddex geesood, Xildhibaanada ayuu ugu bishaareeyey in dhawaan dalka ayka bilaaban doonto mashaariic horiumarineed, taas oo laga heli doono shaqooyin badan.
In kasta oo ay xukuumaddeenu muddo 100 maalmood oo kaliya xilka Qaranka hayso, hadana Waxaannu is-bedel la taaban karo ka muujiney hagaajinta nidaamka maamul iyo haykalka dawladnimo, iyadoo ay hirgelinteeda saldhig u ahayd isku duubnida iyo dadaalka qaybaha kala duwan ee waaxyaha xukuumadda oo dhan iyo taageerada shacbiga. MUUSE BIIXI CABDI
Muuse Biixi Cabdi Madaxweynaha Somaliland ayaa sheegay in ciidamadiisu ay ku durkeen dhanka xuduuda Bari ee gobolka Sool, waxaana uu hoosta ka xariiqey in haddii aysan heleen taageerada shacabka gobolka Sool aysan suurta gal noqoteen. Dowladda Soomaaliya ayuu ku eedeeyey in ay isku daydey in ay beesha caalamka ka dhaadhiciso in Somaliland ku soo duushey, laakiin waxaan caddeyney in xuduudkayagii ay ka dhiman tahay weli 66 km ayuu yiri.
Muranka gobolka Sool ayaa u dhexeeya Puntland iyo Somaliland, inkasta oo Somaliland hadda isku daydo in ay ku shaabadeyso Dowladda federaalka ah, waxaana is horfadhiya ciidamo labada dhinac ee Puntland iyo Somaliland ah.
Biixi ayaa cadeeyey in ay ka go’an tahay in ay xuduudka soo xiraan, oo ay leeyihiin ciidamo bur ah oo awooda in ay difaacaan Somaliland.
Hoos ka daawo qayb ka mid ah khudbadii Muuse Biixi.